Global Voices teny Malagasy » RuPaul Ao Amin’ny RuNet : Tonga Any Rosia Noho Ny Fandikànteny An-tsitrapon’ireo Mpisera Amin’ny Aterineto Ny ‘Drag Race’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Avrily 2017 15:13 GMT 1	 · Mpanoratra Ben Cohen Nandika (fr) i Pierrik Berthier, Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Rosia, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT), Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Dikasarin'ny sombin-tantaran'ny andiany faha-9 amin'ny Drag Race. Loharanon-tsary : YouTube.
Mahavariana, manan-talenta, pelaka ary miaraka amin'ny dikany amin'ny teny Rosiana : hatramin'ny 2014, nisy vondrona mpandika teny miasa an-tsitrapo avy amin'ny tambajotra sosialy Vkontakte manao izay hahatafiditra amin'ny aterineto miteny Rosiana ny fandaharan'ny télé-réalité amerikana nahazo loka “RuPaul's Drag Race , ( Fifaninànana RuPaul Drag )” ahitàna an'i RuPaul Charles, ilay sarimbavy malaza erantany, mitady izay ho kintana vaovaon'ny ‘drag’ amerikana.
Telo taona lasa izay no niforonany, ny vondrona “RuPaul” ao amin'ny VKontake  dia mahavory ekipa misy olona folo tia mandika teny sady mivelatra ka efa hahangona mpisera mazoto maherin'ny 5.000 manerana ny Firaisana Sovietika teo aloha. Efa tantara 70 mahery no voadikan'ilay ekipa tamin'io fandaharana (izay efa amin'ny andiany faha sivy) io, ahitàna lehilahy maka fombanà vehivavy, miova endrika ary miady mba hahazo ny anaram-boninahitra “Kintana Avon'ny drag Amerikana” mandritra ny andianà fifanintsanana mandreraka.
Ho an'i Nikita, Rosiana pelaka mpianatra amin'ny ambaratonga faharoa sady isan'ny mpandika teny, ilay fandaharana dia mampatsiahy azy fa malalaka amin'ny maha-izy azy izy, ary mety aminy tsara. Nikita, izay niaina tany amin'ny firenena izay mametraka ny lalàna ” manohitra ny fampielezankevitra ho an'ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy ary ny vavy sy ny vavy” sy mandàla ny tahiry nentim-paharazana mirona amin'ny fanilihana ny fiarahan'ireo vitsy an'isa mitovy taovam-pananahana, dia nilaza tany amin'ny RuNet Echo fa io fandaharana io dia manaporofo fa tsy hoe ara-dalàna fotsiny ny finiavana haka tahaka ny mombamomba ny tsy mitovy fananahana amin'ny tena sy fanekena ny fironany ara-pananahana, fa ao ihany koa ny fahalalahana izay tokony hankalazaina sy omena valisoa mihitsy aza.
Sary ravaky ny vondrona ” Mijere RuPaul's Drag Race” ao amin'ny VKontakte.
Tsy zavatra mora ny mamadika ilay fandaharana ho an'ny vahoaka rosiana. Na mora aza ny ny mijery azy amin'ny aterineto, tena fanamby ny mandika ny pitsopitsony rehetra ho an'ny tontolo miteny rosiana. Tenin-jatovo manokana ho an'ny vondrom-piarahamonina LGBT sy drag-n'i Etazonia, voambolana izay tsy mbola misy amin'ny teny rosiana, no ankamaroan'ny teny iresahana.
Na tsy mbola miroborobo toy ny any amin'ny tany Tandrefana aza ny kolontsaina drag any Rosia, dia misy izy, fa tsy mbola miseho masoandro. Efa am-polo taona maro izao no nisiany, sarimbavy no ahafantarana azy, ary mbola misy izy na eo aza ny tsindry ataon'ny fitondrana amin'ny fikambanana LGBT sy ny fahamaroan'ny heloka bevava fankahalàna atao amin'ny mpikambana amin'ny LGBT. Tamin'ny 2014, namboarin'ny Nightline ny sarin’ ilay mpanakanto drag rosiana izay nandositra an'i Rosia lasa any Etazonia taorian'ireo fanafihana feno herisetra nitranga natetika tao amin'ny trano fandihizana nahazatra azy tao Mosko.
Maharitra efatra andro ka hatramin'ny tapa-bolana mahery ny fandikàna tantara iray. Raha vantany vao misy tantara iray azo adika, dia mifampiresaka amin'ny sehatra fifampiresahana ireo mpandika teny ary mifampizara momba izay ampahany ho adikan'ny tsirairay, amin'ny ankapobeny dia sombiny maharitra 10 ka hatramin'ny 20 minitra ho an'ny tantara iray maharitra 45 minitra. Samy alefan'ny tsirairay any aminà tonian-dahatsoratra voatondro, izay avy eo hanangona ireo dikanteny, ny fandikàna vitany . “Samy manao izay tratry ny heriny ny rehetra” hoy i Nikita.
Na izany aza, indraindray mikatso ireo mpandika teny. Raiso ohatra ny fifanintsanana rap ao anatin'ilay andiany faha-6, izay nampiasan'ilay mpifaninana Joslyn Fox ( Patrick Joslyn no tena anarany) ny teny hoe “motherfishin”. Amin'ny kolontsaina drag, ny teny hoe “fishy” [” hafahafa” ” mamofona trondro” amin'ny teny frantsay, NDT] dia milaza drag queen tena mitovy be amin'ny vehivavy ka mety ho heverina ho tena vehivavy amin'ny fiainany andavanandro. Ny olona miteny anglisy na mahazo teny anglisy dia hahafantatra ny hevitra anankiroa fonosin'ilay teny sy ireo voambolana mahazatra sasany. Fa rehefa tsy misy voambolana rosiana azo ilazàna azy, sarotra ny mahazo ilay kilalaon-teny ho an'ireo izay tsy mahafehy ny teny. Ho an'i Nikita, ” ny tsy fisian'ny kolontsaina drag rosiana tena mivelatra tsara, sy ny tsy fisian'ny voambolana mazava andikàna azy no tena mampananosarotra kokoa ny fandikàna ilay Fifaninànana RuPaul's Drag.”
RuPaul Charles, avy amin'i David Shankbone. Loharanon-tsary: Flickr.
Nanahirana ahy nandritra ny roa volana ny “[Motherfishin’], ary farany hitako ihany ny ilazàna azy hoy i Elizabeth Ruskova, iray amin'ireo mpandika teny voalohany tao amin'ilay vondrona, tamin'ny RuNet Echo. Misy trondro antsoina hoe sterliad [sterlet], toy ny fitambaran'ny teny hoe sterva [mpamosavy] sy ny bliat [tai***] no fandrenesana azy… Nisy nikitika tany anaty lohako, ary fantatro fa azoko io no teny tonga lafatra”.
Indraindray, tsy dia misy loatra ny manahirana. “Condragulations!” [ avelao aho hi-condraguler anao!” NDT] foana no tenenin'i RuPaul amin'izay mpifaninana mandresy amin'ny fifanintsanana, izay adikan'ny ekipa ao amin'ny Vkontakte hoe pozdragliayou, raha hoe pozdravliayou [arahabaina !] no tokony ho izy mba hanaovana izay hampitoviana azy ho an'ireo mpijery rosiana.
Na izany aza anefa, mba tsy hanitsakitsahana ny lalàna rosiana, tsy maintsy hentitra ireo mpitantana ny vondrona ao amin'ny Vkontakte amin'ny fifehezana ny fidirana amin'ireo tantara ireo, izay sintonina avy any amin'ny haba-tranonkala hafa amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny ankamaroany. ” 18 taona farafahakeliny no ekenay hiditra ao amin'ilay vondrona. Raha misy tsy manome ny taonany amin'ny mombamomba azy, na tsy mametraka sary dia tsy raharahainay ny fangatahany. Tahaka izany ihany koa, raha misy olona tsy manao ny taonany, indraindray dia angatahanay amin'ny hafatra manokana ny fanamafisana ny taonany”. hoy ny fanazavan'i Elena, iray amin'ireo mpitantana ny vondrona, tamin'ny RuNet Echo.
Na eo aza ireo ezaka mafy tsy maintsy ataon-dry zareo mba hanamboarana ilay fandaharana ho amin'ny aterineto rosiana, na araka ny lalàna na araka ny fomba fitenenana, dia miray saina sy fo ireo mpandika tenin'ny RuPaul amin'ny teny rosiana fa tena zava-dehibe ho an'ny mpankafy rosiana, na avy ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBT na tsia ny asan-dry zareo. Elisabeth, mpandika teny ihany koa, dia nilaza tamin'ny RuNet Echo fa ” tena rivotra madio ao amin'io fiarahamonina mpandàla ny nentin-drazana izay manempotra anay mandrakariva io i Neny Ru. Mampiaina anay io fandaharana io sady mampahafantatra anay fa mety ho izahay ihany no izahay. Loharanon-kery tena tsara i Neny Ru.”
Nanazava tsotra ny olana sedrain'ny vondrona i Nikita, isan'izany ny ao anatin'ny vondrom-piarahamonina LGBT. ” Ny fiarahamonin'ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy ary ny vavy sy ny vavy any Rosia dia tena tsy mifandefitra. Heverin'ireo pelaka lahy na “voajanahary” fa noho ny amin'ireo pelaka vavy toetra kokoa no anenjehana an-dry zareo, ary ny mifamadika amin'izany no heverin'ireto farany, tafihan'ireo mpanenjika ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy ary ny vavy sy ny vavy ny pelaka noho ny sasany amin-dry zareo miaina an-kiafina ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy ary ny vavy sy ny vavy. Eken'ny Drag Race ny maha-vehivavy ary toheriny ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina pelaka izay manavakavaka ireo mpikambana vavivavy kokoa. Izany no olana hita ao amin'ny haba-tranonkala fitadiavana naman'ny lahy sy lahy na vavy sy vavy miaraka, toerana ahitàna ireo lehilahy miseho ho tena lehilahy na “masc” matetika mitsipaka ireo izay miseho ho vehivavy amin'ny famaritana “no fems” [“tsy sipa”] amin'ny mombamomba azy ireo. RuPaul izy tenany no nampatsiahy  io tranga io tamin'ny fanambaràna fa ” ny voatsindry izy tenany no hanjary ho mpanindry.” Na teo aza izany rehetra izany, dia heverin'i Nikita ho toy ny loharanom-panantenana ilay fandaharana. ” Tena voazarazara ilay vondrom-piarahamonina, saingy heveriko fa afaka hampitambatra indray ny rehetra io fandaharana io.”
FANAMARIHANA : tsy hita ato amin'ity lahatsoratra ity ny anarana fenon'ireo mpandika teny ho fiarovana azy ireo satria mijaly noho ny fanavakavahana ireo mpikambana vitsy an'isa ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBT any Rosia.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/04/21/98082/
 RuPaul's Drag Race: http://www.logotv.com/shows/rupauls-drag-race
 manohitra ny fampielezankevitra ho an'ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy ary ny vavy sy ny vavy” : https://www.theguardian.com/world/2013/jun/11/russia-law-banning-gay-propaganda
 mbola misy : https://themoscowtimes.com/articles/russian-drag-queens-57177